Sample Sub-cat	dhamma radio
အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ အရှင်ဧသက	အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်များ၏ပဓာန နာယက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ
သတိပဌာန်ဝိပသနာအလုပ်ပေးတရား-L.A	သဘာဝရိပ်သာ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသာရ	ပရိဝါသ်သံဃာတော်များ - L.A	Articles Latest ArticlesMost PopularDhamma
ပဌာန်း ပါဠိတော် Pathana Pali Chant...
2:37:47	New	တၜဂုဏ်အ္စာ သ႘လာစာရ - ဓရ်မှုံယဿု - တိုန်ဟာစှေ်ဟာပိုယ်ချပ်ဗ္စါ
08:27	New	ဘာသာရေးနှငျ့ လူမှုရေး - ဖားအောကျဆရာတျော
09:25	New	ခှေးမကွီးရဲ့နို့စို့ခဲ့ရသော ရှငျဘုရငျ - ဖားအောကျဆရာတျော
Pa Auk Saydaw
50:04	New	အချိန်နှင့် အလုပ် တရားတော် (၁/၂) - သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူသော အချိန်နှင့် အလုပ် တရားတော် (၁/၂) (၂၅-၂-၂၀၀၃) - Thitagu Sayadaw Dr Nanisarra - (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at
41:44	New	အချိန်နှင့် အလုပ် တရားတော် (၂/၂) ) - သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူသော အချိန်နှင့် အလုပ် တရားတော် (၂/၂) (၂၅-၂-၂၀၀၃) - Thitagu Sayadaw Dr Nanisarra - (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at
1:01:07	New	ကြက်နှင့်ချည်တိုင်၊ ဆန်ပုံဥပမာပြ တရားတော် (က ၇၀/၇၃) - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလဟောကြားဆုံးမ တော်မူအပ်သော ကြက်နှင့်ချည်တိုင်၊ ဆန်ပုံဥပမာပြ တရားတော် (က ၇၀/၇၃) - Mogok Sayadaw gyi U Vimala, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-39930
53:55	New	ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် (၁/၂) (၆၉/၄၃၅) - မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန
မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန ဟောကြားတော်မူသော ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် (၁/၂) (၆၉/၄၃၅) (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at
54:39	New	ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် (၂/၂) (၇၀/၄၃၅) - မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန
မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန ဟောကြားတော်မူသော ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် (၂/၂) (၇၀/၄၃၅) (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at
46:11	New	ကီသုကောပမသုတ်၊ အို နာ သေ သံသရာလည်မှု တရားတော်(အစ) - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလဟောကြားဆုံးမ တော်မူအပ်သော ကီသုကောပမသုတ်၊ အို နာ သေ သံသရာလည်မှု တရားတော်(အစ) တရားတော် (က ၆၉/၇၃) - Mogok Sayadaw gyi U Vimala, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on
07:51	New	ဥမ်မာဒန်တီ - ဖားအောကျဆရာတျော
40:37	New	သိကြားမင်းရေးသောခန္တီစာတမ်း တရားတော် (၁/၂) ( ၂၃-၁-၂၀၀၃) - သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူသော သိကြားမင်းရေးသောခန္တီစာတမ်း တရားတော် (၁/၂) ( ၂၃-၁-၂၀၀၃) - Thitagu Sayadaw Dr Nanisarra - (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-399301336796561
44:05	New	သိကြားမင်းရေးသောခန္တီစာတမ်း တရားတော် (၂/၂) - သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူသော သိကြားမင်းရေးသောခန္တီစာတမ်း တရားတော် (၂/၂) ( ၂၃-၁-၂၀၀၃) - Thitagu Sayadaw Dr Nanisarra - (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-399301336796561
49:23	New	ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်ဆုံးမရတာသည် အခက်ဆုံး တရားတော် (က ၆၈/၇၃) - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလဟောကြားဆုံးမ တော်မူအပ်သော ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်ဆုံးမရတာသည် အခက်ဆုံး တရားတော် (က ၆၈/၇၃) - Mogok Sayadaw gyi U Vimala, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-3
1:14:06	New	ကာလိက၊ အကာလိက (အဆုံး) တရားတော် (၃/၃) (က ၆၇/၇၃) - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလဟောကြားဆုံးမ တော်မူအပ်သော ကာလိက၊ အကာလိက (အဆုံး) တရားတော် (၃/၃) (က ၆၇/၇၃) - Mogok Sayadaw gyi U Vimala, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at https://www.facebook.com/Dhamma-
1:01:08	New	ရှစ်ဖြာမဂ္ဂင် နိဗ္ဗာန်ဝင် တရားတော်(၁/၂) (၆၆/၄၃၅) - မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန
မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန ဟောကြားတော်မူသော ရှစ်ဖြာမဂ္ဂင် နိဗ္ဗာန်ဝင် တရားတော် (၁/၂) (၆၆/၄၃၅) (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-399301336796561
1:02:43	New	ရှစ်ဖြာမဂ္ဂင် နိဗ္ဗာန်ဝင် တရားတော် (၂/၂) (၆၈/၄၃၅) - မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန
မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန ဟောကြားတော်မူသော ရှစ်ဖြာမဂ္ဂင် နိဗ္ဗာန်ဝင် တရားတော် (၂/၂) (၆၈/၄၃၅) (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-399301336796561
08:08	Buddhist Chant Mahamangala Sutta
51:39	Bangla Buddhist Sutta Full Album By Priya Barua
00:53	SUMEDHA BARUA
26:25	ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း ပါဠိတော် - မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး နှင့် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး
16:18	Dr Mehn Tin Mon's Abhidhamma Day3Part3(14 Jan 2015)
2:10:49	သီတဂူဆရာ​တော်​ဘုရားကြီး ဦးဥာဏိဿရ. - မေတ္တာတရားတော် သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်
03:21	မေတ္တသုတ် (နီပေါဆရာတော် )
1:05:50	လေယာဉ်ကွင်းဆရာတော် ဦးဇောတိက''ရတနာ အစစ်ကို သိပါစေ တရားတော် ''တတိယနေ့(၇.၂.၁၅)တတိယနေ့(၇.၂.၁၅)
1:01:58	Pathana Pali Chant ပဋ္ဌာန်းပါဋိတော်
သတိပဌာန်ဝိပသနာအလုပ်ပေးတရား-L.A	သဘာဝရိပ်သာ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသာရ	ပရိဝါသ်သံဃာတော်များ - L.A	Tags
Dhamma Channel aungkyawnaing528 dhammabns dhammaransi dhammadownloadlive dhammavideochannel vvsansan ဦးဇောတိက vipasana mogok abhidhamma mehn days mkmyint/videos school ilanani bahal naag mehm day khin proficiency shcool buddhist buddha dhamma simulation graha monastery gautam part-b bhudda cycles waisak myouk myanmar part gautama smoke Latest Articles
ကိုးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ပုံ (ပါဠိ-မြန်မာ)
ကိုးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ပုံ (ပါဠိ-မြန်မာ) အဟံ ဘ...
ရှစ်ပါးသီလခံ ယူဆောက်တည်ပုံ၁။ အဟံ ဘန္တေ တိသရဏေန...
2:17:05	အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ အရှင်ဧသက၏ ပဋ္ဌာန်း ပဥှာဝါရ သင်တန်း - Day-63
1:54:53	အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ အရှင်ဧသက၏ ပဋ္ဌာန်း ပဥှာဝါရ သင်တန်း - Day-62
1:41:24	အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ အရှင်ဧသက၏ ပဋ္ဌာန်း ပဥှာဝါရ သင်တန်း - Day-61
2:06:10	အင်းတကော် ဖားအောက်တော်ရရိပ်သာ ဆရာတော် ဦးပညာနန္ဒ ဓမ္မသဘင် - မတ်လ၂၄ ရက် ၂၀၁၇ - Arcadia L.A. U.S.A
2:10:40	NVEExport 0002
2:00:29	အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ အရှင်ဧသက၏ ပဋ္ဌာန်း ပဥှာဝါရ သင်တန်း - Day-57
2:01:05	အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ အရှင်ဧသက၏ ပဋ္ဌာန်း ပဥှာဝါရ သင်တန်း - Day-58
1:52:54	အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ အရှင်ဧသက၏ ပဋ္ဌာန်း ပဥှာဝါရ သင်တန်း - Day-57
1:56:21	အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ အရှင်ဧသက၏ ပဋ္ဌာန်း ပဥှာဝါရ သင်တန်း - Day-56
© 2017 Dhamma Video. All rights reserved